Nkwekọrịta ikike | Law & More B.V. | Mba netherland
blog » Nkwekọrịta ikike
Arịa ọgụgụ isi Ikike dịrị iji kpuchido ihe okike gị na echiche gị site na ojiji nke ndị ọzọ na-enwetaghị ikike. Agbanyeghị, n'ụfọdụ oge, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ n'ịchọrọ ka e jiri ihe ndị okike gị meere ahịa, ị nwere ike chọọ ka ndị ọzọ nwee ike iji ya. Mana ikike ole ka ịchọrọ inye ndị ọzọ gbasara ihe ọgụgụ isi gị? Iji maa atụ, enyere ndị ọzọ ịtụgharị, belata ma ọ bụ mezie ederede nke ijidere ya? Ma ọ bụ melite gị patented mepụtara? Nkwekọrịta ikike bụ ụzọ dabara adaba nke iwu iji gosipụta ikike na ọrụ ibe ha n'ihe metụtara iji na nrigbu nke akụ ọgụgụ isi. Edemede a kọwara ihe nkwekọrịta nkwekọrịta ikike ahụ gụnyere, ụdị ndị dị, yana akụkụ ndị na-abụkarị akụkụ nke nkwekọrịta a.
Ikike ọgụgụ isi na akwụkwọ ikike
A na-akpọ nsonaazụ nke ọrụ ọgụgụ isi ikike ikike ọgụgụ isi. Differentdị ikike dị iche iche dị iche na okike, njikwa na oge. Ihe atụ bụ ikike nwebiisinka, ikike ụghalaahịa, patenti na aha ahia. A na-akpọ ikike ndị a ikike ndị ọzọ, nke pụtara na ndị ọzọ nwere ike iji ha naanị ikike nke onye nwere ikike. Nke a na - enye gị ohere ichedo echiche dị oke mkpa na echiche okike. Otu ụzọ isi nye ikike maka ndị ọzọ bụ site na inye ikikere. Enwere ike inye nke a n'ụdị ọ bụla, ma ọ bụ n'okwu ọnụ ma ọ bụ ederede. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ide ihe a n’akwụkwọ na ikike ikike. N'ihe banyere ikikere ikike nwebisiinka, nanị nke a ka iwu chọrọ. Ikike edere edekwara edebanye aha ma na-achọsi ike ma ọ bụrụ na esemokwu na enweghị nghọta gbasara ọdịnaya nke ikike ahụ.
Ọdịnaya nke nkwekọrịta ikike
A na-emechi nkwekọrịta ikike n'etiti onye nyere ikike (nke nwere ikike ọgụgụ isi) na onye nyere ikikere (onye nwetara ikike). Isi nkwekọrịta ahụ bụ na onye nyere ikikere nwere ike iji ikike aka naanị nke onye nyere ikikere n'ime ọnọdụ ndị edere na nkwekọrịta ahụ. Ruo oge onye nyere ikike ịgbaso usoro ndị a, onye nyere ikikere agaghị akpọ ikike ya megide ya. N'ihe banyere ọdịnaya, ya mere, enwere ọtụtụ ihe a ga-achịkwa iji belata ojiji nke onye ikikere dabere na oke nke onye nyere ikike. Akụkụ a na-akọwa ụfọdụ akụkụ ndị nwere ike ịdabere na nkwekọrịta ikike.
Ndị ọzọ, oge na oge
Nke mbu, odi nkpa ichoputa ọzọ na nkwekọrịta ikike. Ọ dị mkpa iji nlezianya tụlee onye ruru eru iji ikikere ma ọ bụrụ na ọ metụtara ụlọ ọrụ otu. Na mgbakwunye, ndị ọzọ ga-abụ ndị aha ha zuru oke. Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị ịkọwa akụkụ ahụ n'ụzọ zuru ezu. Firstly, ọ dị mkpa ka o doo anya na ihe na ikike metụtara. Dịka ọmụmaatụ, ọ metụtara naanị aha azụmaahịa ma ọ bụ sọftụwia ahụ? Nkọwa nke ikike ọgụgụ isi na nkwekọrịta ahụ bụ ihe amamihe dị na ya, yana, dịka ọmụmaatụ, ngwa na / ma ọ bụ mbipụta akwụkwọ ọ bụrụ na ọ gbasara patent ma ọ bụ ụghalaahịa. Nke abuo, ọ dị mkpa ka esi eji ihe a eme ihe. Nwere ike ịnwe ikikere ịhapụ obere ikikere ma ọ bụ jiri ikike ọgụgụ isi mebie ikike ya site na iji ya na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ? Nke ato, ndi n'ókèala (dịka ọmụmaatụ, Netherlands, Benelux, Europe, wdg) nke a ga-ejikwa ikikere mee ihe. N'ikpeazụ, oge ga- ekwenye, nke nwere ike idozi ma ọ bụ daa. Ọ bụrụ na ikike ọgụgụ isi nke ihe metụtara metụtara nwere oke oge, nke a kwesịkwara iburu n'uche.
Nkwekorita a aghaghi ikwuputa udiri ikike o bu. E nwere ohere dị iche iche, nke ndị a bụ ndị nkịtị:
nanị: Naanị onye ikikere nwere ikike iji ma ọ bụ jiri ikike ikike ọgụgụ isi eme ihe.
Na-abụghị nanị: onye nyere ikikere nwere ike inye ndị ọzọ ikike ikikere na mgbakwunye na onye nyere ikikere ma jiri ma jiri ikike ọgụgụ isi ahụ n'onwe ya.
Naanị: ọkara ụdị nke ikikere nke otu onye nwere ikikere nwere ike iji ma jiri ikike ọgụgụ isi were ya na onye nyere ikikere ahụ.
Mepee: onye ọ bụla nwere mmasị na-ezute ọnọdụ ga-enweta akwụkwọ ikike.
Ọtụtụ mgbe enwere ike ịnweta ego dị elu maka ikike a na-ekewaghị ekewa, mana ọ dabere n'ọnọdụ ụfọdụ akọwapụtara ma nke a ọ bụ ezigbo nhọrọ. Akwụkwọ ikike a na-ekewaghị ekewa nwere ike inyekwu mgbanwe. Tụkwasị na nke ahụ, ikikere a na-ekewaghị ekewa nwere ike ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị nye ikikere na-enweghị atụ n'ihi na ị na-atụ anya ka onye nke ọzọ zụọ ahịa maka echiche gị ma ọ bụ echiche gị, mana onye ikikere ahụ anaghị eji ya eme ihe ọ bụla. Ya mere, ị nwekwara ike ịmanye ụfọdụ ọrụ na onye ikikere banyere ihe ọ ga-emerịrị ikike ikike ọgụgụ isi gị ka opekempe. Dabere n'ụdị ikikere, ya mere ọ dị oke mkpa idobe ọnọdụ nke enyere ikike.
N'ikpeazụ, enwere ike ịnwe akụkụ ndị ọzọ a na-arụkarị na nkwekọrịta ikike:
The ego na ego ya. Ọ bụrụ na ebubo ụgwọ, ọ nwere ike ịbụ ego a na-akwụ ụgwọ (ikike ikike), ụgwọ ndị eze (dịka ọmụmaatụ, pasent nke ntụgharị) ma ọ bụ ọnụego otu (Ukwu ego). A ga-ekwenye oge na nhazi maka akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ oge.
Iwu dabara adaba, ụlọ ikpe tozuru etozu or mkpezi ikpe / onye ogbugbo
Ozi nzuzo na ihe nzuzo
Sethazi mmebi iwu. Ebe ọ bụ na onye ikikere n'onwe ya enweghị ikike iwu ịmalite usoro na-enweghị ikike ịme ya, a ga-achịkwa nke a na nkwekọrịta ahụ ma achọrọ ya.
Transferability nke ikike: ọ bụrụ na transferability achọghị ka onye nyere ikike ikikere, a ga-ekwenye na ya nkwekọrịta.
Nyefee nke ihe ọmụma: enwere ike mechie nkwekọrịta ikike iji nweta etu esi ama. Nke a bụ ihe ọmụma nzuzo, ọ na-abụkarị nke teknụzụ, nke ikike patent anaghị ekpuchi.
Ihe ọhụrụ. Ekwesịrị ịme nkwekọrịta banyere ma ikike ọhụụ nke onye ikikere ga-ekpuchikwa ọhụụ ọhụụ nke akụ ọgụgụ isi. O nwekwara ike ịbụ na onye nyere ikikere na-etolite ngwaahịa ahụ ọzọ yana onye nyere ikikere chọrọ irite uru na nke a. N'okwu ahụ, a ga-enwerịrị ikikere na-abụghị naanị maka onye nyere ikikere nke ọhụụ ọhụụ na ọgụgụ isi.
Na nchịkọta, nkwekọrịta ikike bụ nkwekọrịta nke enyere onye nyere ikikere ikike ikike iji / ma ọ bụ jiri akụ ọgụgụ isi. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na onye na-enye ikikere chọrọ ịmekọrịta echiche ya ma ọ bụ ọrụ ọzọ. Otu nkwekọrịta ikike adịghị ka nke ọzọ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ nkwekọrịta zuru ezu nke nwere ike ịdị iche na ngalaba na ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịdị na ikike ikike ọgụgụ isi dị iche iche na otu esi eji ya, enwekwara ndịiche dị iche iche n'ihe banyere nkwụghachi ụgwọ na iche. Enwere olile anya, isiokwu a enyela gị ezigbo echiche banyere nkwekọrịta ikike, nzube ya na akụkụ kachasị mkpa nke ọdịnaya ya.
Still ka nwere ajụjụ gbasara nkwekọrịta a mgbe ị gụsịrị isiokwu a? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na iwu ikike ọgụgụ isi, ọkachasị n'ọhịa nke nwebisiinka, iwu ụghalaahịa, aha azụmaahịa na patenti. Anyị dị njikere ịza ajụjụ gị niile, anyị ga-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka ịdepụta nkwekọrịta ikike kwesịrị ekwesị.
Previous Post Ọrụ nke ndị nlekọta na oge nlekọta nsogbu
Next Post Nyefee nke ịrụ